शैली कसरी लागू गर्ने:
पाठ चयन गर्नुहोस्. एक शब्दमा क्यारेक्टर शैली लागू गर्न, शब्दमा क्लिक गर्नुहोस्. अनुच्छेद शैली लागू गर्न, अनुच्छेदमा क्लिक गर्नुहोस्.
तपाईँंलेउपकरणहरू - अनुकूलन गर्नुहोस् - कुञ्जीपाटी ट्याब पृष्ठमा शैलीहरूमा सर्टकट कुञ्जीहरू मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ।
ढाँचा शैली भर्नुहोस्
शैली लोड गर्नुहोस्